झण्डाको विपर्यास यात्रा – भूपाल राई «
झण्डाको विपर्यास यात्रा – भूपाल राई
प्रकाशित मिति : 23 August, 2020 1:28 pm
झण्डा-प्रशङ्ग : एक मिटर रातो कपडा, केही रङ्ग र केही सापेक्षित न’श्लका टोटेमहरु उनेर जब बनाइन्छ कुनै झण्डा । र, जब बनाइन्छ त्यसलाई कुनै आस्थाको कथित `राष्ट्रीय झण्डा´ तब त्यो निरपेक्ष रहिरहदैन । निरपेक्ष नरहे पछि यो स्वभाविक छ कि त्यहाँ कसै कसैले आफ्नो अनुहार भेट्दैनन ।
आफुलाई बिम्बित पाउदैनन । आफुलाई नपाए पछि झण्डा च्या’तिनुजल्नुलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ । इतिहासमा यसरी धेरै पटक धेरै ठाउँ झण्डा जलेका छन् । यो कृया आफ्नो खोजको सामान्य प्रतिक्रिया हो । र यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि नेपालको राष्ट्रीय झण्डा जलाउन कुनै मङ्गोल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता भैरहनु पर्दैन ।
पुनश्च : ठिक यतिखेर सम्झिरहेछु २०७०/७१ साल । र सम्झिरहेछु आफैलाई । जतिखेर आफैबाट पनि राष्ट्रीय झण्डाबारे एक कविता लेखिएको रहेछ । अखण्ड सुदुर पश्चिमाञ्चलको आ’न्दोलनमा फहराइरहेको राष्ट्रीय झण्डाबारेको त्यो कविता यहाँ मात्र स्मरणको लागि ।
झण्डाको विपर्यास यात्रा
त्यागेर आफ्नो सनातन गद्दी
राज्य हाँक्न निस्किएको
कुनै मध्ययुगिन राजकुमार जस्तै
निस्किएको छ यात्रामा
एउटा त्रिकोण झण्डा
कुन राज्य हाँक्नु छ झण्डालाई ?
अथवा टेक्नु छ
निरपेक्ष दुवोहरुको पहिचान !
र निस्किएको छ यसरी
घुमाउँदै चन्द्र सुर्यको
अटलसिं इतिहासको गर्धनमा
किन फहराइरहेछ गोरखा दरबारको धङधङी ?
काट्दै पहिचानको सयौँ लाख टाउको
किन उत्रीरहेछ धर्मयु’द्दमा
राष्ट्रीय झण्डा ?
कहाँ पुग्ला यो
यसरी मान्छेको स्वायत्त हावामा
काटेर मान्छेकै पखेटा ?
दस लाख दुवोहरुको गिँडमाथि
चलाएर बिसे नगर्चीकालिन तरवार ?
साढे सत्र लाख कमैया ढाडमाथि
उभिएर अखण्ड अञ्चल ?
र कहाँ पुग्ला
टेकेर पहाडको बुटजुत्ता ?
मध्ययुगिन राजकुमार जस्तै
जो मात्र एकतर्फी यात्राको लागि
के त्यही हो राष्ट्रीय झण्डा ?
झोसेर वंशज-आगोको वृक्ष
नानिहरुको खाली दिमागमा
जो हुर्किरहेछ हरेक पुस्ता
नानिहरुकै गिदि चाटेर
खै कहाँ छ त्यो चन्द्रवंशको स्थुल जरा
नानिहरुको माटोमा ?
कहाँ छ सुर्यवंशको ईतिहास
तिनिहरुको माटोको किताबमा
र किन उत्रीन्छ
फेरि तिनिहरुकै बि’रुद्द
एक मिटर रङ्गिन कपडा ?
अखण्डताको हावा हम्किदै
पर…पर कुनै रातो चिज
नानिहरुकै पहिचान वि’रुद्द
ओ ! सुरक्षा निकाय
र अखण्ड अञ्चलाधिसहरु
ठिक उल्टो यात्रामा छ
यतिखेर राष्ट्रीय झण्डा
जो क्रमश फर्किरहेको छ
पृथ्वी राजमार्ग हुँदै
गोरखा दरबारको अतिततिर
कृपया, रोक त्यहिँनिर झण्डालाई
र आशिन गराऊ
त्यही सनातन गद्दिमा
नत्र छुट्टिने छन्
यति लामो अन्तरालपछि
`मान्छे र झण्डा´
र उठ्नेछन केही स्वभाबिक प्रश्नहरु –
`कि रोकेर त्यही बिन्दुबाट
विभेदको उल्टो यात्रा
किन हुन सक्दैन राष्ट्रीय झण्डाजस्तो
किन बिचाराधिन छ
यतिखेर राष्ट्रीय झण्डा ?
(बरिष्ठ कबी तथा लेखक भूपाल राईको फेसबुकबाट ।)